Dhaamsa Irreechaa Bara 2021(Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO Irraa) – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDhaamsa Irreechaa Bara 2021(Ajajaa Ol’aanaa ABO-WBO Irraa)
Hunda dura baga ayyaana irreechaa kan bara 2021f isin gahe, waliinuu nu gahe jenna. Guyyaan kun guyyaa hawwamaa fi kabajamaa, Oromoon Onaa fi Ollaan, Reeraa fi Dhedaan walitti bahee, malkaa bu’ee coqorsa jiidhaa qabatee, miyuu ciicootti naqatee, bunaa qabatee Waaqa uume isaa kadhatu waan taheef; namni guyyaaa har’aa jirenya isaa keessatti, ayyaana kana lubbuun dhaqqabe, Horaa-bulaa tahuu isaa baree, Waaqa kan har’aa na geesse kan bara dhufuullee madhaa maatii tiyya waliin nagayaan na gahi jedhee kadhatu dha. Baga Waaqni uumaa nuu hunda lola hamtuu diinni nu irratti lallabe irra aannee, biyya abbaa keenyaa dhuunfachaa ayyaana kanaan nu gahe.
Yeroo Irreecha bara 2021 ayyaaneffannu kanatti birraan dhufu kun Oromoo fi saboota hundaaf birraa barii, kan qabsoon bilisummaa Oromoo xumura argatee, bilisummaa keenyaan itti guduunfamu akka tahu, akkasumas bara ummatootni cunqurfamoo marti sirna cunqursaa fi ukkaamsaa PP jalaa itti bilisooman akka tahu hawwii qabnu maqaa miseensota ABO-WBOtiin ibsina. Ganna darbe keessa ummatni Oromoo akkasumas cunqurfamootonni marti qabsoo hadhooftuu geggeessaa turaniin milkiilee boonsaa galmeessaniin, mootummaan PP farra-ummatootaa fi shorarkeessaa tahuu hawaasni addunyaan akka hubatu qofaa osoo hin taane, raayyaan ittisa biyyaa kan humna guddaa gaanfa Afrikaatti qaba jedhamu, caasaan isaas ta’e qaamni isaa haleelamee caccabe dha.
Milkiilee argaman kanneen galmeessisuufis ummatni Oromoo fi ummatootni cunqurfamoo wareegama gosa hedduu baasanii jiru. Addatti ammoo ummatni Oromoo bilisummaa isaa gonfachuu fi biyya isaa irratti ajajaa tahuuf qabsoo finiinsaa tureen wareegama ulfaataa baasee jira. Daa’immanii hanga Dargaggoo, haawwanii fi abbootiin qabsoo kana keessatti lubbuu isaanii dabarsanii kennaniiru. Waggoota sadan darban keessa qabsoo hadhooftuu Waraanni Bilisummaa Oromoo, miseensotni, maadheeleen ABO-WBO fi Warraaqxoti Qeerroon geggeessaniin wareegamni ulfaataan baafame injifatnoo galmeesseen qabsoo bilisummaa sadarkaa ol’aanaatti ceesise. Mooraan diinaa caccabee wal gaarreffannaa fi wal dhabbiin akka hudhaman taasise. Mooraan diinaa haleellaa irra gaheen wal mormii walii isaanii gidduutti uumamen laamsha’uun sadarkaa suphamuu hin dandeenye irra gaheera.
PPn qabsoo ummattootaan dura dhaabbatamee shakkiin malee akka duraatti ajajaa bittaa isaa itti fufuu kan hin dandeenye tahuun mirkana. Kana waliin qabsoon ummatootaa PP irratti adeemsifamen, PPn mootummaa farra ummatootaa kan gaaffiilee ummatootaaf deebii kennuu hin dandeenye tahuu ifa gochuu danda’uun injifannoo argame keessatti ida’ama.
Mootummaa farra-ummatootaa kana jabinaan dura dhaabbachuun karaa irraa maqsuuf tarkaanfii ABO-WBOn 2021 keessa fudhate keessaa inni duraa Kora Guddaa gaggeeffachuu ture. Korri kun rakkoolee bara sadan darban keessa nu mudateef furmaata kennee ka’e. Rakkoo jaarmayaa, siyaasaa fi waraanaa erga miseensoti ShG-ABO duraanii gara Finfinneetti galanii booda qabsaawota bakka sadiitti qoodee ture, amma bakka tokkotti deebisee tokkummaa Qabsaawotaa ittiche. Diinni akka Korri kun hin gaggeeffemne bakka kora kanaatti lola banus, ilmaan Oromoo qaroo dachee Oromiyaa keessatti lolachaa kora gaggeeffachuu dandahuun qabsaawotaa fi ilmaan Oromoo biratti seenaa boonsaa ta’ee galmaawee jira. Kora Guddaa boodas hoggana waaltawaa jalatti duula maqaa Gootota Oromoo Gameeyyiin mooggafame gaggeessuun milkii ol’aanaa galmeessuun qaamuma milkii kora kanaati. Har’a WBOn dachee Oromiyaa bakka hedduu dhuunfatee of dura tarkaanfachaa jira. Qabsoo kan akeeka dhaabaa irratti hundaa’e raggaasuu fi murtiilee jajjaboo wareegama ulfaataa nama gaafatan dabarsuun qabsoo bilisummaa Oromoo fuula dura furgaasan irratti hundaa’uun lafa kaahes diinaa fi farreen mataa gadi qabachiisaa jira. Gartuun Goollicha Dheengee faarsaa bahan, kan mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo diiguuf hojjechaa turan, biyya keessaa fi alaa keessatti saaxiluun diina waliin hojjechaa jiraachuu isaanii kan ifoomses ture.
Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan ummata Oromoon alatti gargaarsa homaatuu kan hin qabne, qabsoo of irratti hirkannoon adeemsifamu kanaan, diinaa fi gufuulee Qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbatan of duraa mancaasuu irra darbee caccabsuu danda’uun injifannoolee ganna darbe keessa argaman keessatti galmaawu. Of duras Diinnii fi Farreen ciisanii bulu jennee hin eegnu. Gochaa farrummaa bara 2018 irraa eegalamee bifa dhokataan dinagdee qabsaawota dirree irraa kutuun, akka qabsaawoti dirree hagabanii harka kennatan yaalame fashaluu isaas gaaffii fi deebbii Goollichi Dheengee OBNtti ibseen mirkaneessee jira. Ammas qabsoo of irratti hirkannoon gaggeessinu daran jabeessuun miseensotaa fi deggertoota, Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi sabboontotaan hubatamee qabsoo addaan hin citne adeemsifameen akeeka farreenii fi gufuulee caccabsuun fashalsee qabsoon bilisummaa sadarkaa ukkaamsuun hin danda’amne irra gahameera. Eebbii WBO dirreelee Oromiyaa mara keessatti gaggeeffamaa jiran hundis egeree Oromoof abdii guddaa akka ta’an shakkiin hin jiru.
Dhaabbattootni mirga namoomaas qabsoo finiinaa jiru keessatti hammeenya gara-jabinaa PPn raawwatamaa jiru gabaasuu akka jabeessanii itti fufan dhaammanna. Mootummaan PP farradimookraasii fi shorarkeessaa tahuu bal’inaan akka ibsamu kan taasise qabsoo ummatootaa adda durummaan ammoo qabsoo ummata Oromoo ti.
ABOn hundeeffama isaa irraa kaasee hanga ammaatti tokkummaa Oromoo gadi dhaabuu fi dhugoomee akka mul’atu taasisuu irratti bal’inaan hojjete. Akeekni eebbifamaan kun akka hin dhugoomneef diinni gufuulee hedduu uumaa fi garaagarummaa xixiqqaa afarsuun tokkummaa Oromoo diiguuf yaaliin godhes akkuma akeeka isaa biroo maseenfamee jira. Keessattuu ganna dabarsine kana keessa tokkummaan Oromoo akka urjiitti ifee mul’atuun isaa diina hundee dhaa raase. Qabsoo bilisummaa ABO-WBOn durfamuun tokkummaan mirkaneeffame. Galatni kan qabsaawotaa fi sabboontota Oromoo haa tahu! Har’a Oromoo adda baasuun gonkumaa sadarkaa hin dandahamne irra gahame jira. Ummatni Oromoo tokkummaan hiriiree akka biyya isaaf falmatu dandeessisuuf hojii hojjatamee firii boonsaa argamsiise kanaaf galatni kan qabsaawota wareegamtootaa fi ummata keenya tokkummaan sosso’uun falmatuu danda’ee ti. Kunis injifannoo ol’aanaa qabsoon galmeesse tahee yaadatamaa jiraata.
Oromoon, Injifannoo qabsoon argamsiise kana jabeeffataa, akka hin dhaabbanne taasisuuf itti fufiinsaan irratti hojjatamuu qaba. Gufuulee diinaan kaa’aman ummatni Oromoo injifannoo irratti galmeeffate kan biraa duula kanneen PPf daboo bahan irratti galmeessee dha. Mootummaan PP Oromiyaan kan Oromoon keessatti badhaadhu, aadaa, afaan fi eenyummaa isaatiin boonu, hojjatee jiraatu osoo hin taane, hiyyummaan keessatti mankaraaruu fi keessaa baqachiifamu akka tahuuf hojjata. Duulli har’a babal’atee mul’atu kun waggoota sadan dabraniif osoo adddaan hin citiin ummata Oromoo irratti adeemsifamaa kan turee dha. Ummatni Oromoo duula bal’aa itti baname kana jabinaa fi tokkummaan of irraa ittisuu danda’uun kan dinqisiifamuu dha. Hanga mootummaan PP aangoo irra jirutti lolli Oromiyaa fi Oromoo irratti xiyyeeffate kun waan hin dhaabbatneef, duula jireenya Oromoo irratti agaamame kana caalaatti maseensuuf Oromoon tokkummaa isaa jabeeffataa diina dura dhaabbatuun itti fufuu qaba.
Diinni ummata Oromoo qabsoo ummata Oromoo doomsuuf kan itti xiyyeeffate biroon caasaa ABO biyya keessaa fi sochii Qeerroo cabsuu ture. Kanaaf, diinni akka toftaatti ABO karaa nagaa qabsaawu dandaha jedhee maadhee fi miseensota ABO adda baasee haleeluu ture. Kun diinaan qofa osoo hin taane, kittillayyoota diinaa waggoota sadan PPf ergamaa bahanii fi of tahanii mul’atuu hin dandeenye, tajaajiltuu diinaa tahanii jiraatuu murteeffatan dabalata. Caasaan ABO, Qeerroo fi dargaggoon Oromoo duula diinaa kana dura dhaabbatuu irratti wareegama baasan yoomiyyuu seenaan hin dagatu. Kana waliin wal qabatee kanneen dantaa matayyaaf jecha qabsaawota irratti duulaa jiran gochaa farrummaa kana irraa akka dhaabbatan ABO-WBOn gadi jabeessee gorsa. Yeroon kun yeroo kaayyoo fi akeeka ummata Oromoo dura dhaabbatan osoo hin taane, kan waliin hiriiranii diina waloo of duraa kaasan akka ta’e qalbifadhaa jennaan. Waggaa dabarsine kana keessa kan diinaatti dabalee gareelee fi nam-tokkeen diinatti hidhata qabanii fi kanneen kaayyoo bilisummaa Oromootti gufuu tahuu filatan ABO-WBO maqaa xureessuuf ololli adeemsisan bal’aa ture. Kanneen bu’aa bubuutuu argatuuf ori’an akkanaa ummata Oromoo biratti jibbamoo fi tufamoo ta’uus hubachiisna.
Haala kanaan, har’a ABO-WBOn tokkummaa fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo gadi dhaabuu fi jiraachisuuf wareegama ulfaataa baase, Qeerroo fi ABO-WBOn akka gargar ta’anitti ololli adeemsisan ABO-WBO, Qeerroo fi ummata Oromoo daran tokkoomse. Ammas taanaan, farreen fi gufuuleen qabsoo bilisummaa Oromoo dalagaa diiggaa itti jiran irraa of qusatuu diduun, ummata keenyaaf dhimmaa fakkaatuun ergaa diinaa dabarsuu itti fufanii waan jiraniif, ummatni keenya biyya keessaa fi alaa akka of irraa tiksuu qofa osoo hin taane, akka akeeka isaanii maseenuu jabinaan irratti hojjatu ABO-WBOn hubachiisa.
ABO-WBOn jaarmayaa siyaasaa Oromoos tahe kan alagaa ijaaramuu irraa mormii ykn jibbiinsa hin qabu. Qabaatees hin beeku. Ijaaramuun mirga. Haa tahu malee, jaarmayootni siyaasaa Oromoo garii karoorri hojii isaan baafatan kan diina irratti qabsaa’uu osoo hin taane, kan ABO-WBO danda’ame dhabamsiisuu, dadhabame ammoo dadhabsiisuu ti. Akeekni kunis jibbiinsa dhuunfaa, bolola aangoo fi ABO-WBOn dhabame malee mul’atuu hin dandeenyu yaada jedhu irraa madda. Jarmayootni siyaasaa maqaa “Itoophiyaan” ijaaraman ammoo daran akeeka ABO-WBO diiguu fi dhabamsiisuu akka dhaabbataan Oromoon hin beekne xiqqaa dha. ABO-WBO dhabamsiisuu dhaan gaaffii ummata Oromoo ukkaamsuu akeeka jedhuun masakamu.
ABO-WBO fi qabsoon bilisummaa ummatni Oromoo irratti wareegamaa jiran isaan biratti mirga dimokraasii osoo hin taane, kan biyya diiguu ti. ABO-WBOn jaarmayoota kamiifuu mirga isaanii kabajee osoo jiruu kan ABO-WBO kabajuu dhabuun, irratti ololuu fi dhabamsiisuuf shiruun ammattis tahe fuula duratti furmaata argamsiisu hin qabu. Waltajjii argatan irratti maqaa ABO-WBO kaasuun xureessuuf yaaluun dalagaa kanneen gaafatamni itti hin dhaga’amnee fi ummataaf kabajaa hin qabnee ti. Mirga dimokraasiif qabsoofna jechaa kanneen mirga dimokraasii ummata isaaniif qabsaa’an diineffatuun qaanfachiisaa dha. ABO-WBOn kanneen akkanaa of irraa ittisuun akeeka ittiin deeman fashalsaa har’a gahe; fuula durattis of irraa ittisuun mirga tahuu hubachiisa.
Ummatni kamiyyuu hacuuccaa fi saaminsa jalaa walaba tahuu barbaada. Qabeenya isaa irratti ajajaa tahuun fedhii fi mirga ummata hundaa ti. Bilisa tahee dubbatuu, dhiibbaan alatti bakka bu’aa ofii ofiin filatuun mirga dimokraasii jaarraa 21ffaa keessatti bal’inaan mul’atuu dha. Haa tahu malee, har’as taanaan sababa danqaa PPn irraa kan ka’e, ummatootni mirga kana guuttachuu hin dandeenye. Jijjiirama xixiqqaa wayta qabsoo ummatootaan sardamutti fudhatuun mirgi ummatootaa kan kabajame fakkeessee lallabuun cunqursaa fi ukkaamsaa itti fufuun toftaa PP tahe jira. Kana irraas miidhaan dhaqqabu dabalaa akka jiru, duranaafis hammaataa kan deemu tahuun hin shakkisiisu.
Addatti ammoo ummata Oromoo irratti xiyyeeffatuun karoorri baafame gara sadarkaa ol’aanaatti kan cehe tahuun gochaan mirkanawee jira. Kanaaf, Qabsoo Bilisummaa Oromoo sadarkaa amansiisaa irra gahee jiru fiixa baasuuf jabinaan hojjatuun dirqama qabaawotaa fi ummata keenyaa ti. Filmaata biraas hin qabnu. ABO-WBOn Qabsoo Bilisummaa Oromoo milkeessuuf jaarmayaa jabeessuu irratti xiyyeeffatuun hojiin hojjate firii qabeessa. Kanaaf, kan ijaarame daran jabeessuu fi babal’isuun injifannootti tarkaafnachuun dirqama miseensotaa fi deggertootaa tahuu beeknee birraa kana injifannoon keessa bahuuf warraaquu qabna. Diinni ummata Oromoo hanga aangoo irraa hin maqsamnetti Qabsoo Bilisummaa Oromoo dura dhaabbatuu itti fufa. Karoora ummata Oromoo cunqursaa fi saaminsa jala tursu baafachuun dalagaa diinummaa hojjata.
Ummata Oromoo qe’ee isaa irraa humnaan buqqisuudhaan lafa-dhablee taasisuun karoora PP dhaan bal’inaan hojii irra oolfamaa jiru tahee itti fufaa jira. Sababa kijibaa ’ol’aantummaa seeraa kabachiifna’ jedhuun Oromoo lafa isaa irraa buqqisanii ari’uun, ajjeesuu fi yakka irratti dalaguun ganna darbe keessa mul’ate dha. Oromiyaan kan Oromoon keessatti badhaadhu, hojjatee jiraatu osoo hin taane kan keessatti hiyyoomee beelaan mankaraaruu fi keessaa baqachiifamu taasifamuu eenyuyyuu jalaa dhokataa miti.
Mootummaan PP addatti Qeerroo Oromoo irratti xiyyeeffatuun maqaa ’ABO-shanee’ jedhuun, ajjechaa fi hidhaan ganna dabarsine keessa bal’inaan raawwate gochaa gara-jabinaa fi tarkaanfii mootummaa shororkeessaa ti. Dargaggoon Oromoo gochaan bineensummaa irratti raawwatamullee kaayyoo ABO-WBO bakkaan gahuu irraa humni isa hanqisuu danda’u akka hin jirre gahaatti hubachiiseera. Qeerroon Oromoo adda durummaa fi murannoon falmaa adeemsiseen ummata isaatti abdii horuutti dabalee akka isa cinaa hiriiru taasiseera. Hidhaa fi ajjeechaaf osoo hin jilbeenfanne, wal gurmeessuu dhaan diddaan agarsiisaa jiru kan dargaggoo biroofis fakkeenya tahee dha. Qeerroon kaleessa dhagaa darbataa ture har’a meeshaa lolaa hidhatee ofii fi saba isaa ittisuu bira darbee, biyya abbaa isaa Oromiyaa dhuunfachuu eegalee jira. ABO-WBOn hiree kanaan PPn lola ummata Oromoo mohuu hin dandeenye keessa jiraachuu hubachiisaa, ummata haqa isaaf falmatu yoomiyyuu injifataa tahuu isaa yaadachiisa.
Akeekni ummatni Oromoo qabsaawaafii jirus akka injifannoon gudunfamuuf ABO-WBOn karaa hundaan ummata waliin tahuu gadi jabeessee hubachiisa. Duula waggoota sadan darban ABO-WBO dhabamsiisuuf tattaafatameen ABO-WBOn hin dhabamne. Haa tahu malee diinni ammayyuu abjuu ABO dhabamsiisa jedhuun dhama’aa akka jiru hundatu arga. ABO-WBOn duula fuula hundaa keessaa fi alaan irratti gaggeeffamaa turee fi jiru irra aanee, kaayyoon ittiin deemu ummata biratti jaalala, kabajaa fi deggersa horataa dhufuu irraa, ummatni Oromoo sagalee tokkoon ABO-WBOn alatti furmaati hin jiru! Karaan tokkittiin Oromoo gara bilisummaatti geessu ABO-WBO qofaa dha! jechuun ifatti dhaabbii isaa ibsatuutti jira. Deggersaa fi jaalala ummataa kana kan argamsiise wareegama miseensotaa, ummata keenyaa fi deggertootaa ti. Qabsoo itti fufsiisuu fi dhaaba isaatti iggitii gochuu keessatti shoorri WBO ol’aanaa tahuun hin falamsiisu. Ammas taanaan WBOn magaalaa fi baadiyyaa bal’aa keessatti diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhatuun diina mogolee laaffisuu irra darbee lafa bal’aa Oromiyaa tohatee, guutuu Oromiyaa dhuunfachuuf tarkanaanfataa jira. Duula WBO gaggeessaa jiru kana milkeessuuf, ummatni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa bakkaan gahuu keessatti qooda irraa eegamu akka gumaachu gaafanna.
Har’a manni hidhaa PP ilmaan Oromoo yakka homaatuu hin qabneen guutamee argama. Kanneen mana hidhaa PP hin beekamne keessatti hiraaraa jiranis danuu dha. Lammiileen mirga ofii fi ummata isaaniif jechaa miidhaan qaamaa fi sammuu irra geessifamaa jiru kunneen hundi ummata Oromoo biratti kabajaa qaban. Ummatni Oromoo ilmaan isaa kanneen falmaa mirgaa keessatti qooda fudhatuu irraa diinni irratti roorrisaa jiru gargaaruu akka addaan hin kutne gaafataa, ABO-WBOn karaa isaaf danda’amu hundaan bira dhaabbachuu kan itti fufu tahuu hubachiisa. Ummatni Oromoo kan qabsoo geggeessaa turee fi jiru jijjiirraa buqqaasaa mirga isaa kabajchiisu argamsiisuufi. Milkaa’uun qabsoo Oromoo milkaa’ina qabsoo ummatoota cunqurfamoo maraa akka ta’es hubachiifna.
Kana wallaaluun kanneen ummata Oromoo diina godhatuun irratti duulan diinni har’a waliin duulaa jiran bor kan isaanitti garagalu tahuu dagatuu hin qaban. Kana waliin ummata Oromoo nagaa dhorkatanii nagaan jiraanna jechuun kan hin yaadamnee fi dogoggora dha. Waan taheef, diinatti maxxanuu lagachuun, fira tarsiimoo kan tahe ummata Oromoo waliin hiriiruun, diina waloo loluun ummatoota cunqurfamoo irraa eegama. Waliin jireenya boriifis daandiin ijaaraa fi amansiisaan kana qofa tahuu hubachiisaa, dalagaa hariiroo baroota dheeraa ummatoota gidduu booressu akka hatattamaan dhaaban ABOn gorsa isaa dabarsaaf. Dabalataanis kan furmaata waaraa argamsiisu mirga ummata Oromoo beekuu fi fudhatuu tahuu hubachiisa. Ummatni keenya ammoo weerara itti banamu kamuu irraa of ittisuuf mirgi heera addunyaa akka isaaf haayyamu hubatee of irratti amantaa guutuun of ittisuu irratti akka jabaatee hojjatu irra deebiin hubachiifna.
Haala ummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru argaa, kaayyoo diinaa eenyummaa Oromoo haguuguu fi dhabamsiisuu akeekkate maxxanfachuudhaan diina waliin hiriiruun hafnaan mul’atuun iyyuu wayta qaanfachiisaa tahe jiru kanatti, hoggana siyaasaa fi qondaala waraanaa PP tahuun caasaa mootummaa keessatti haammatamanii diinaaf hojjechuun seeraanis tahe seenaan gaafachiisaa dha. Waan taheef, kana hubachuun ilmaan Oromoo caasaa mootummaa kamuu keessatti argamtan addatti ammoo waraana PP keessatti sadarkaa hunda irratti argamtan marti waamicha ummatni keessan deddeebisee isinii dabarsaa jiruuf akka owwaattan ABO-WBOn irra deebi’uun waamicha isiniif godha. Paartiin filameen jira, mootummaa haaraa dhaabbachaa jira jedhu kun, afaan qawween bittaa isaa itti fufuuf murteeffate waan ta’eef ummata kamuu biratti fudhatama hin qabu. Ummatootni kan barbaadan bilisummaa dha. Addatti ammoo ummatni Oromoo nama namaan bakka buusuun faaydaa akka hin argamsiifne fi tarkaanfiilee fakkaatoo kanaan duraa irraa barnootaa fi muyxannoo gahaa argatee jira. Waan taheef, kanneen jechoota ummataan darbatamanitti fayyadamuun, sirna Oromoon kabaju of dura qabuun fi uffata aadaa Oromoo uffachuun ummata gowwoomsuu dandeenya jedhanii, afaan damma dibatanii summii facaasaa jiran of irraa gatuuf jabaannee irratti qabsaa’uun mirga keenya of harka galfachuuf haa kaanu.
PPn tumsaa fi gargaarsa biyyoota ollaa fi fagoo irraa argachuun ummata Oromoo fi kanneen biroo kumoota hedduun lakkaa’aman lafa isaanii irraa buqqiseera. ABO-WBOn waggoota sadan darbaniif mootummaa PP kan maqaa ’seera kabachiisuu’ jedhuun lola uummattoota irratti labsee, saaminsa, cunqursaa fi yakka hiriyaa hin qabne dhala namaa irratti geggeessaa jiru akka biyyooti ollaa fi dhihaa qabeenya, leenjii waraanaa fi dippilomaasiin akka hin gargaarre irra deddeebi’uun yaadachiisaa turuun ni beekama. Waamichu sunis amma dhagahamuu jalqabuun mootummooti dhihaa qobqobbii PP irra kaahuu eegaluun injifannoo guddaa dha. PPnis waa’illaan biyyoota dhiha, UN keessaa hojjetan yakkuun fi biyya irraa arihuun wallaalummaa fi doofummaa PP agarsiisu dha. Qaamotaa fi namoota miidhaa ol’aanaa PPn ummata mirga isaaf falmatu irra gahaa jiru, argaa fi dhaga’aa callisuun gaafachiisaa tahuu ABO-WBOn ammas irra deebi’ee yaadachiisa. Qaama miidhaa ol’aanaa uummata irraan dhaqabsiisaa jiru gargaaruun ammoo yakka tahuu hubachiisaa, mootummooti gara bahaa fi Turki akka gargaarsa kana irraa dhaaban akeekkachiisa. Akkasumas PPn yakka uummata irratti raawwataa jiru dhaabuuf, yakkamtoota Oromiyaa keessaa jiraatan tohatee seeraatti dhiheessuuf ABO-WBOn akka hojjechaa jiru hubachiisa.
Qabsoon Bilisummaa Oromoo, qabsoo of irratti hirkannoo fi murannoon mirga keenya of harka galfachuuf wareegama baafneen armaan gahe. Kanaan boodas qabsoon bilisummaa fi walabummaaf gaggeessaa jirru, kan duubatti hin deebifamne tahuu mirkaneessina. Kana jabeeffachuu fi wal malee homaa akka hin qabnee fi ala irraa homaa akka hin eegganne caalaatti hubachuun birraan kana milkii ol’aanaan diina irratti galmeessuuf akka sossoonu gadi jabeessinee hubachiifna! Irreechi barana kan milkii, injifannoo, gammachuu, bilisummaa fi walabummaa nuuf haa ta’u! Gadaan Quufaa Gabbina!
Onkoloolessa 1, 2021
Know that we will LIVE OR DIE with you!